Mety ve ny Mitaky Fanazavana Amin’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Seychelles Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mizo Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MISY milaza fa tsy mety ny mitaky fanazavana amin’Andriamanitra. Tsy manaja azy, hono, ny olona iray raha manontany azy hoe maninona izy no mamela na tsy mamela zavatra iray hitranga.
Izany koa angamba ny hevitrao. Mety ho gaga anefa ianao fa efa nisy olona tsara fanahy nitaky fanazavana tamin’Andriamanitra.
Hoy, ohatra, i Joba, mpanompon’Andriamanitra tsy nivadika: “Nahoana ny ratsy fanahy no mbola velona foana, ary tratrantitra sady lasa mpanankarem-be?”—Joba 21:7.
Hoy koa i Habakoka mpaminany: “Nahoana no jerenao fotsiny ny mpamitaka, ary nahoana no mangina ianao rehefa atelin’ny ratsy fanahy ny olona marina kokoa noho izy?”—Habakoka 1:13.
Na i Jesosy Kristy aza nilaza hoe: “Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no nahafoy ahy ianao?”—Matio 27:46.
Raha jerena ny teny manodidina an’ireo, dia tsy misy resaka mihitsy ao hoe tezitra i Jehovah * Andriamanitra rehefa nanontaniana an’ireo. Tsy mahagaga izany. Tsy tezitra, ohatra, izy rehefa angatahantsika izay ilaintsika mba hahasalama antsika. Faly aza izy manome izany. (Matio 6:11, 33) Vonona hanome fanazavana antsika koa izy raha izany no mampitony ny fo sy ny saintsika. (Filipianina 4:6, 7) I Jesosy aza nampirisika ny mpianany hoe: “Mangataha foana, dia homena ianareo.” (Matio 7:7) Raha jerena ny teny manodidina an’io tenin’i Jesosy io, dia tsy nasainy hangataka zavatra fotsiny isika, fa nasainy hanontany izay fanontaniana lehibe tiantsika ho fantatra koa.
Iza amin’ireto àry no hanontanianao an’Andriamanitra raha avela hanao izany ianao?
Ny Baiboly no mamaly an’ireo satria “avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra” izy io. (2 Timoty 3:16) Andeha àry hojerentsika ny antony mahatonga ny olona sasany hanontany an’ireo sy ny valiny omen’ny Baiboly.
Hizara Hizara Mety ve ny Mitaky Fanazavana Amin’Andriamanitra?
w12 1/11 p. 3